Ngaba ukutya kunokuba bugcisa ? Lo ngumbuzo oye wafumana ingqalelo eyongeziweyo kwiminyaka embalwa edlulileyo kwi- aesthetics ; kweli nqaku siza kujongana nezizathu eziphambili eziye zaveliswa ngokuchasene nokuvavanya kwamava okutya, kwezinye iimeko, iifom zezobugcisa obugqwesileyo. Ngendlela emithathu eyahlukileyo apho ukutya kunye nobugcisa bunokungena phakathi, jonga eli nqaku elihlukileyo.
I-Caducity of Food
Iphuzu lokuqala elingaphakanyiswa kukuba ukutya kunokukhawuleza: umfanekiso, umzobo, okanye itempileni inokuhlala iminyaka emininzi, mhlawumbi i-millennium; ukutya okudliwayo apho ivenkile yokudlela e-El Bulli eyayisetyenziselwa ukulungiselela iminyaka embalwa edlulileyo ide kwaye ihambe. Okanye, khawucinge i-coffee espresso enomnandi: iingcali zibonisa ukuba ziyadliwa ngaphakathi kwemizuzu emibini ukususela xa zenziwe. Ngenxa yalokhu, kubonakala ukuba ubukhulu obungaphantsi kwabelwane kunye nolondolozo phakathi kwabantu lukhawuleza.
Ngakolunye uhlangothi, umntu unokuphendula ukuba, okokuqala, ubuninzi bezobugcisa bobugcisa besikhathi esifanayo bunjalo ngendlela yokufakela, ngoko ke kungokukhawuleza njengokutya okuninzi. Ngaphezu koko, iintlobo zobungcali ezifana nomdlalo wemidlalo kunye nomculo (isib. I-jazz) zisekelwe kwintsebenzo. Ekugqibeleni, nangona sicinga ngemisebenzi yobugcisa njengoDichelangelo kaDavid, kubonakala ngathi sonke ixesha sihlangana nayo sinokuthile okuhlukile ; oko kukuthi, indlela efanelekileyo yokujonga ubugcisa kukuhlalutya amava okwenza ukuba kwenzeke, kunokuba kubekho ukuzinza kwezinto eziza kwenza amava anjalo; ngaphandle kokuba ukuhlala kwimeko yimeko echaphazelekayo.
(Siyakhumbula, apha, ukuba njengamahlobo amaninzi omculo, i-cuisine ilawulwa ngamanyathelo aqhubekayo anceda ukugcina ukuhambelana phakathi kwexesha: oko kukuthi, zokupheka.)
Okwesibini, umntu unokuphikisa ukuba amava okugcoba aphezulu kakhulu kunamanye amava e-aesthetics. Oku akunjalo nje ngokuba ukutya kungekudala, kodwa nangenxa yokuba ukunambitha kuyindlela ewonakalisayo : kufuneka utshabalalise into oyithandayo.
Ngenxa yoko, ukunambitheka ngokungathintekiyo into ethile. Sinokuthi, ngokubhetele, sithetha ngamanye ethu amava okugcoba, sinethemba lokuba zombini izinto esizifumene nazo kunye nendlela yethu yokukhulelwa ngayo ziya kwenzeka. Ngaloo nto, ngokuqinisekileyo yonke into esinokuyibona ingathathwa njengento enxulumene nesifundo; kodwa kwimeko yokutya esijongene nokunyanzeliswa kokunyanzelisa ngakumbi.
Isichaso esivela ekuthobeleni sixhomekeke kwelinye, mhlawumbi sisisiseko, isichaso: ukuba ukutya akukwazi ukuthetha intsingiselo . Oku akuthethi ukuba into oyidlayo ayithethi nto kuwe, okanye ukuba ukuba umthandi wakho ulethe ushokoledi engenakuthetha ukuba uyakuthanda; Ingongoma leyo kukuba intsingiselo ayikho ekudleni; intsingiselo ingaba kwisenzo, ngamazwi athengiswe ngexesha ukutya kukunikezelwa okanye kudliwe; Ukutya ngokwalo kunokukwazi ukuqhuba zonke iintlobo zentsingiselo, andithwali nayiphi na inkcazo ecacileyo nganye .
Impendulo yesicatshulwa sokugqibela isuka ekuqwalaseleni ukuba nokuba imifanekiso okanye imifanekiso isichazwa ngendlela engaphantsi kweendlela ezahlukeneyo, kuxhomekeka kwindlela ehlangene ngayo. Akwacaci ukuba kutheni amava okugcoba, ngokuphathelele kulo mba, aya kuthathwa njengento engabonakaliyo ngakumbi kunezigulane.
Eminye imithombo ye-intanethi
Ifilosofi yeWebhsayithi yeProjekthi yokutya, ukuqokelela uluhlu lwemithombo enxibelelwano eline-intanethi ngesihloko.
Ukungena kwi-Philosophy of Art kwi- Britannica Online Encyclopedia .
Ukungena kwenkcazo yobugcisa kwiStanford Encyclopedia of Philosophy .
I-American Society ye-Aesthetics website, equle iindaba kunye nolwazi ngesihloko.
I-British Society ye-Aesthetics website, "ejolise ekukhuthazeni uphando, uphando kunye nengxoxo yezobugcisa obuhle kunye neentlobo ezihlangeneyo zamava ukusuka kwifilosofi, kwengqondo, kwizenhlalakahle, kwizembali, eziphambili kunye nemfundo."
I-British Journal ye-Aesthetics, enye yeendaba ezihamba phambili entsimini.
Umbhalo we-Aesthetics kunye neCritic Criticism, enye yeendaba ezihamba phambili kwintsimi.
Ukuqokelela kweengcinga zefilosofi kwifilosofi yobugcisa.
Izikolo ze-Ivy League Law
Ziziphi iimvande zeOlimpiki?
UmKristu weenkwenkwezi ngelo xesha likaAcarius
ImiDlalo yokuzonwabisa Imifanekiso ye-Skaters Inokudlala kwiRating Skating
Wedding Mormon! Ndenze ntoni?
Iqonga le-Confederate lokutshisa iNew York
Ngaba i-Dinosaurs iguquke njani?
IAuburn University Admissions